Ary avy eo ny eropeantsika: vilany kolontsaina manalefaka
Ny Repoblika Federalin'i Alemana dia toerana fitetezana malaza nandritra ny taona maro. Ny antony lehibe mahatonga izany dia ny safidin'ny fitaterana tsara eto an-toerana sy ny fahitana isan-karazany. Na inona na inona fialan-tsasatra fialantsasatrao, kolontsaina na mpitia natiora, samy mahazo ny volany eto amin'ity firenena ity ny tsirairay.
Fa maninona no jerena ny lavitra? fialan-tsasatra any Alemana
Raha mitady tranombakoka avo lenta ianao, trano fisakafoanana tena tsara ary fotoana tsy tambo isaina hankalazana azy dia tokony hitsidika ny iray amin'ireo tanàna efatra lehibe indrindra ianao: Berlin, Hamburg, Munich ary Cologne. Berlin dia tsy isalasalana fa i metropolis ara-kolontsaina ao amin'ny firenena ary ny tsy ampoizina dia ny mpitsidika mahazatra hatrany hatrany miaraka amin'ny atmosfera mamorona sy mamorona.
Fialan-tsasatra any Alemana sy Eropa - © benik.at / Adobe Stock
Hamburg miaraka amin'i Speicherstadt fanta-daza manerantany dia manolotra fahaiza-manao kanto, raha manasa anao hitsangatsangana any amin'ny faritra manodidina i Munich, afovoan'i Bavaria. Etsy ankilany, i Cologne kosa dia mampiaiky volana azy noho ny fisakaizany Rhineland sy ny Katedraly Cologne, trano be mpitsidika indrindra eto amin'ny firenena.
Any Alemana, ireo millennia lasa dia azo zahana amin'ny alàlan'ny relik maro. Ny dian'ireo Romana dia hita na aiza na aiza, toy ny fandroana sy ny lakandrano. Trier sy Xanten, ohatra, dia malaza eto.
Manana fiangonana tsara tarehy marobe tsy manam-paharoa koa ity firenena ity. Ny Frauenkirche ao Dresden sy ny Katedraly Aachen manokana dia nahazo laza malaza iraisam-pirenena ihany koa. Miaraka amin'ny dome vato manaitra azy ireo sy ireo tranobe Renaissance dia ohatra manokana amin'ny maritrano masina izy ireo.
Ny Moyen Orient dia misolo tena tsara amin'ny lafiny hafa koa: malaza amin'ny alàlan'ny lapan'andriana maro be i Alemana, izay nahazoana azy ny famerenana amin'ny laoniny ary nahasarika olona tokoa. Ambonin'izany rehetra izany dia mendrika hotononina eto ireo trano mimanda akaikin'i Rhine sy Moselle. Ny tanimboaloboka sy ny lalan'ny dia an-tongotra manodidina ny renirano roa dia anisan'ny be fitiavana indrindra amin'ny firenena iray manontolo ary mampifandray ireo toerana mora azo amin'ny toerana somary kely.
Neuschwanstein Castle, etsy ankilany, dia toa voapaika vao avy amin'ny angano, mijoro fotsy sy mendri-kaja eo amin'ny havoana ala any atsimon'i Bavaria.
Fa na dia ny mpandeha mitady hatsaran-tarehy voajanahary aza dia tsy mandeha irery any Alemana. Misy valan-javaboary 16 feno, izay ahitana toerana sy tontolo iainana isan-karazany.
Ny telo amin'izy ireo ihany no manarona ny Ranomasina Wadden malaza any avaratry ny firenena, izay ahafahana mitsangatsangana. Ho an'ireo mpankafy ny tontolon'ny tendrombohitra, ny Valan-javaboary Eifel, izay ahafahana mijery ireo taolan'ny hetsika volkano, ary mety tsara indrindra i Sachone Switzerland miaraka amin'ireo fananganana vatosoa Elbe. Farany nefa tsy latsa-danja, valan-javaboary maro no ahitana ala tsara tarehy sy midadasika, ohatra any amin'ny Harz, Black Forest na Hunsrück.
Mety ho an'ny mpaka sary matihanina sy mpankafy ny firenena. Tsy noho ny toetrandro mahafinaritra ihany io fa noho ny antony maro samihafa izay hita. Farany nefa tsy azo odiantsy azo atao, azo atao ny mahazo ny kojakoja sy kojakoja saika hatraiza hatraiza, ary ny sary dia azo amboarina amin'ny tranokala ao anatin'ny fotoana fohy raha ilaina.
Ny olona maro karazana sy ny kolontsain'izy ireo dia miaina amin'ny faritra somary kely amin'ny kaontinanta eropeana. Raha mifalifaly ao amin'ny Oktoberfest Bavarian any lederhosen sy dirndls ny lehilahy sy ny vehivavy, dia manana "siesta" ny masoandro amin'ny andro mitataovovonana. Ny fon'ny mpaka sary rehetra dia mitempo izay ifanarahan'ny faritra sy fiaviana maro samihafa.
Betsaka ny olona manintona ny hafanan'ny Karaiba na ny metropolise Amerika Avaratra amin'ny fialan-tsasatr'izy ireo. Ny sasany mahita kolontsaina vaovao any Azia na Afrika. Na izany aza, maro ireo mpandeha no manadino fa izao tontolo izao eo am-baravarantsika dia efa manana karazana atolotra izay mety tsy ho hitanao any amin'ny kaontinanta hafa eto an-tany.
Scandinavia dia tsy maintsy manolotra tontolo mahafinaritra amin'ny tontolo milamina. Indrindra ireo mpandeha mitady fiadanam-po sy fialan-tsasatra handosirana ny fiainany andavan'andro dia any amin'ny toerana mety any avaratr'i Eropa. Na sarina moose any an'efitra na sarinà panorama amin'ny filentehan'ny masoandro hita any amin'ny farihy maro any Scandinavia, dia azo antoka ny fampisehoana sary any Suède, Norvezy ary Failandy.
Na izany aza, raha mbola malemy loatra ho anao ny avaratra, na dia amin'ny fahavaratra aza dia afaka mahita ireo fanjakana atsimo eropeana ianao. Espaina, Italia ary Portugal dia tsy ny masoandro sy fasika ihany no atolotra, fa manana kolontsaina sy tantara mahavariana ho hita ihany koa izy ireo. Lavitra ny morontsirak'ireo mpizahatany sy ny hotely lehibe, ny mpitsangatsangana dia afaka mahafantatra ny firenena tsirairay avy amin'ny endrika vaovao tanteraka, indrindra ny any afovoan-tany, izay nitazonan'ilay vakansy rehetra. Ka ahoana ny amin'ny trano fanofana kely ao Pyrenees miaraka amina fitsangatsanganana vitsivitsy sy fitsangantsanganana vitsivitsy? Na ahoana na ahoana, dia hisy fotoana maro ho an'ny sary mihaja.
Na ny safidy voatanisa aza dia taratry ny fifantenana kely fotsiny izay mety ho hita any Eropa. Rehefa dinihina tokoa, iza no mahalala hoe inona no tena izy any Islandy, Lithuania na Estonia? Ary mahamenatra izany! Ny zavatra tsara tokony hatao dia ny hahitanao tena amin'ny fialan-tsasatrao manaraka ary alao ny sary fahatsiarovana anao amin'ny sary.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 29. Aprily 2021 15. Jolay 2021 Sokajy Fialan-tsasatra, fitsangatsanganana ary fialan-tsasatraKeywords Germany, Eoropa, Heimat erkunden, fialan-tsasatra, Urlaub zuhause
indray Lahatsoratra taloha: Mitadiava akaninjaza
more Lahatsoratra manaraka: Fanalefahana fanatanjahantena | Sakafo sy fanatanjahan-tena